Yini insimbi engagqwali ibhulashi - China Foshan Hermes Steel
Yini insimbi engagqwali ibhulashi
Inqubo yokudweba ngocingo izolahlekelwa ukushuba kwepuleti lensimbi engagqwali ngezinga elithile, ngokuvamile i-0.1 ~ 0.2mm. Ngaphezu kwalokho, njengoba umzimba womuntu, ikakhulukazi isundu, unoketshezi oluqinile uma kuqhathaniswa nomjuluko, ibhodi lokudweba lensimbi engagqwali livame ukushiya izigxivizo zeminwe ezisobala uma lithintwa ngesandla, futhi lidinga ukukhuzwa njalo.
Umdwebo wensimbi engagqwali ngokuvamile unemiphumela eminingana: iphethini yocingo eqondile, iphethini yeqhwa, iphethini yenayiloni. Iphethini yentambo eqondile iphethini engaphazanyiswa kusuka phezulu kuye phansi, futhi ngokuvamile kwanele ukusebenzisa umshini wokudweba ongaguquguquki ukuhambisa okokusebenza emuva naphambili. Iphethini leqhwa yilona elidume kakhulu manje. Iqukethe amachashazi amancane ahlelekile, futhi ingasetshenziswa nge-sandpaper yezinambuzane ukufeza umphumela.
Iphethini lenayiloni lakhiwe imigqa yobude obuhlukile. Ngoba isondo lenayiloni lithambile ekubunjweni, lingagaya izingxenye ezingalingani ukufinyelela iphethini yenayiloni.
Ibhodi lokudweba kwentambo ngokuvamile lisho ukuthungwa komhlaba kanye negama elihlanganisiwe. Igama langaphambili ibhodi elinamakhaza, futhi ukuthungwa komhlaba kufaka imigqa eqondile, imigqa engahleliwe (nolayini), amarobhothi nemicu. Ibhodi lomdwebo wensimbi engagqwali enemibala ingubuso bemibala ehlukahlukene etholwe ngamakhemikhali wamanzi amakhemikhali noma nge-vacuum ion yokufaka imibala ukucutshungulwa kombala endaweni engaphansi kwensimbi engagqwali yokudweba ibhodi.
1. Ukungavuleki kwazo zonke izinto kufanele kunembe, futhi ukuphambuka okuvumelekile kobude bezinto kungu-1mm.
2. Izakhi kufanele zihlolwe ukuthi ziqondile ngaphambi kokusika, ngaphandle kwalokho kufanele ziqondiswe.
3. Ngesikhathi sokushisela, i-electrode noma i-wire kufanele ibe yohlobo olufanelekile ukuthi impahla izoshiselwa, futhi kufanele kunikezwe isitifiketi sefektri.
4. Ingxenye kufanele ibekwe endaweni efanele ngesikhathi sokushisela.
5. Ngesikhathi sokushisela, amalunga we-solder phakathi kwezinto kufanele aqine, i-weld kufanele igcwale, futhi igagasi le-welding ebusweni be-weld kufanele lifane, futhi akumele kube khona ama-undercuts, ama-welds angaphelele, imifantu, i-slag, i-weld uhlevane, ukushisa ngomlilo, ukuklwebheka kwe-arc, Amaphutha anjengama-arc craters nama-pores afana nezinaliti, futhi akumele kube khona okusakazwayo endaweni yokushisela.
6. Ngemuva kokuphothulwa kokushisela, i-slag ye-welding kufanele ikhishwe.
7. Ngemuva kokuthi izingxenye zifakwe ama-welding futhi zahlanganiswa, kufanele zibushelelezi zipholishwe ngomshini ophethwe ngesandla ukwenza ukubukeka kube bushelelezi futhi kuhlanzeke.